Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay Caawisaa Bulshada Reer Miyiga ah
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka
Dhisida bulshooyin xoog leh ayaa lagama maarmaan u ah barwaaqada dhaqaale. Magaceena "Ganacsi" ayaa badanaa dadka ka dhigaya inay marka hore inaga fikiraan inaan u ololeynayno ganacsiga iyo horumarka dhaqaalaha. Waxaan sidaa yeelnaa, laakiin waxaa ka sii muhiimsan fikradda ah in bulsho caafimaad qabta oo nabad qabta ay aasaas u tahay barwaaqo-dhaqaale. Midna kan kale ma jiri karo.
Horumarinta bulshada iyo horumarka dhaqaale waa laba dhinac oo isku mid ah. Dhaqaalaha firfircoon ayaa halbowle u ah ganacsiyada guuleysta iyo dadka isku filnaanta leh. Shaqadayada Ganacsigu waa inaan ka caawinno gobollada, magaalooyinka iyo magaalooyinka inay gaaraan koboc wanaagsan. Waxaan taas ku sameynaa iyada oo loo marayo faylalka guud ee barnaamijyada, adeegyada iyo fursadaha maalgelinta. Waxaan nahay shuraako ku ah hagaajinta dhismooyinka maxalliga ah, nidaamyada biyaha, iskuulada, guryaha la awoodi karo, nabadgelyada guud, adeegyada aadanaha, jardiinooyinka iyo waddooyinka cagaaran, jawi nadiif ah iyo hantida kale ee bulshada muhiimka u ah.
Xoojinta jaaliyadaha ayaa udub dhexaad u ah shaqadeena, xildhibaanada Washington waxay ku aaminaan Ganacsiga inay maal gashadaan ilaa $ 1 bilyan oo ka mid ah miisaaniyada gobolka sanad walba. Waxaan la shaqeyneynaa gobollada, magaalooyinka, dekedaha iyo kuwa kale ee ku hareeraysan gobolka si loo dhiso mustaqbal wanaagsan dhammaan dadka deggan.
Hoyga waa baahi aasaasi ah oo bina aadamku qabo. Iyadoo aan lahayn meel aamin ah, meel hufan oo lagu noolaado, dadka laga yaabo inay halgan ugu jiraan inay noolaadaan waxay leeyihiin rajo yar oo ah inay ku xirmaan adeegyada iyo fursadaha si wax looga qabto baahiyaha caafimaadka jirka iyo maskaxda, iskuul loo aado, shaqo loo qabto ama loo helo carruur iyo qoys kale xubnaha. Guryaha xasilloonida ah ayaa inta badan ah caqabadda ugu horreysa ee looga gudbo ku tiirsanaanta iyo helidda waddo isku-filnaansho.
Si loo abuuro bulshooyin tayo leh, Waaxda Ganacsiga waxay gacan-qabasho kula shaqeysaa hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa gobolka, sharci fulinta, ururada aan macaash doonka ahayn iyo shakhsiyaadka si wax looga qabto saameynta dambiyada, ku xadgudubka mukhaadaraadka iyo rabshadaha iyada oo loo marayo u doodid, ka hortag iyo adeegyo dhibbanayaasha.
Bulshooyinka firfircoon - meelaha dadku rabaan inay ku noolaadaan, ka shaqeeyaan oo ka ciyaaraan - ayaa muhiim u ah inay taageeraan dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Bulshooyinka miyiga waxay leeyihiin hanti gaar ah iyo caqabado. Weydii hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ee magaalooyinka ka baxsan xarumaha magaalooyinkeenna waxa ay ugu baahan yihiin si ay u taageeraan dadkooda iyo ganacsiyadooda, jawaabahooduna way kala duwan yihiin sida muuqaalka iyo dadweynaha gobolkeenna. Baro waxa aan sameyn karno si aan u taageerno yoolalkaaga.
Wasaaradda Ganacsiga waxay kormeertaa howlaha Qorshaha Maareynta Kobaca ee gobolka, oo ka caawiya dawladaha hoose maaraynta koritaanka, laga bilaabo qorshaynta aagagga muhiimka ah iyo dhulalka khayraadka dabiiciga ah ilaa loo qoondeeyo aagagga koritaanka magaalooyinka iyo fulinta qorshayaasha iyada oo loo marayo maalgelinta raasumaalka iyo xeerarka horumarinta.
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay siisaa dawladaha hoose, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo hay'adaha waxqabadka bulshada aaladaha ay u baahan yihiin si loo hubiyo in qof walba la dejiyo beeshooda. Shaqadeenu waxay u dhexeysaa barnaamijyada raasamaalka ee kordhinta saamiga guryaha la awoodi karo iyo barnaamijyada ka hor istaagaya qoysaska inay noqdaan hoylaawe.
Degmooyinka, magaalooyinka iyo magaalooyinka Washington oo dhan waxay ku xiraan Ganacsiga ilaha, maalgelinta iyo adeegyada ka caawiya inay koraan. Laga soo bilaabo nidaamyada biyaha iyo kaabayaasha kale ee dadweynaha ilaa qorsheynta koritaanka waara iyo horumarka dhaqaalaha, waxaan siineynaa ama ku hagaynaynaa bulshada taageerada ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan.
Fursadaha Dhaqaale ee Beesha
Barnaamijka Dhisida Hantida wuxuu taageero siiyaa ururo badan oo maxalli ah si looga caawiyo hagaajinta xirfadaha maaliyadeed ee qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah taasoo u horseedaysa madax-bannaanida maaliyadeed ee muddada-dheer. WorkFirst waxay qandaraasyo la gashaa ururada bulshada ee gobolka oo dhan si ay uga caawiso dadka qaata Caawinta Ku Meel Gaarka ah ee Qoysaska Baahan (TANF) si ay u noqdaan kuwa shaqeeya.